डा. महेश कुमार गौतम
तपाईको बच्चालाई बारम्वार लागि रहने रुघाखोकी , साधारण नहुन सक्छ । यो एलर्जी वा दमको लक्षण हुन सक्छ । बढ्दो वातावरणिय प्रदुषण, शहरीकरण, खानपिन र परिवर्तन हुँदै गएको जीवन शैलीले एलर्जी तथा दमको समस्या बढ्दै गएको छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि करीब १० बालबालिका मध्ये १ जनामा बाल दम रहेको हुन सक्छ र त्यो एक बच्चा तपाईँको आफ्नै पनि हुन सक्छ। त्यसैले समयमा नै विज्ञसँग परामर्श गरी सही उपचार थालनी गरौँ । बालदम सम्बन्धी जनमानसमा रहेका केही प्रश्न र तिनका उत्तर यस प्रकार छन् ।
प्रश्न १: बाल दम भनेको के हो ?
बाल दम भन्नाले बालबालिका श्वास नली सुन्निएर साँघुरिएर श्वासप्रश्वास सम्बन्धी विविध लक्षण देखिने रोग हो। यस्ता बालबालिका कुनै नजिकको परिवारका सदस्यमा पनि दम वा एलर्जी भएको हुनसक्छ।
प्रश्न २: बाल दमको प्रमुख लक्षण के हुन्छन् ?
प्रायजसो दम भएका बालबालिका यस्ता लक्षण लिएर प्रस्तुत हुन्छन् :
– बल्झिरहने लामो खोकी वा निमोनिया,
– स्या स्या वा घ्यारघ्यार र
– श्वास फुल्ने समस्या जुन राती र बिहानीपख बढी हुन्छ, शारीरिक कसरत, हाँसो ,रुवाइपछि बढ्छ, वा चिसो तथा अन्य एलर्जी गर्ने तत्त्वको सम्पर्कमा आउँदा बल्झिन्छ ।
प्रश्न ३: के दम भएको हरेक बच्चामा श्वास फुल्ने समस्या हुन्छ ?
श्वास फुल्ने समस्या दमको एक लक्षण हो तर सबै दम भएका बालबालिकामा श्वास फुल्ने समस्या नदेखिन सक्छ ।
प्रश्न ४: यस्तो लक्षण दोहोरी रहनु को कारण के होला ?
यस्ता लक्षण दोहोरी रहने बालबालिकामा वातावरणिय, घरभित्र रहेका वा कुनै खाने कुराको एलर्जी हुनसक्छ । जसले अन्ततः श्वास नली साँघुरिएर दमको लक्षण देखा पर्छन् ।
प्रश्न ५: बच्चालाई एलर्जी भएको, दम कसरी भयो ?
एलर्जी भन्नाले कुनै पनि दैनिक जसो सम्पर्कमा आउन सकिने तत्त्वसँग शरीर बढी संवेदनशील भई शरीरको कुनै पनि भागमा भिन्न किसिमले प्रस्तुत हुनसक्ने अवस्था हो । एलर्जी राईनाइटिस (Allergic Rhinitis) भएमा लक्षण नाक सम्बन्धी देखिन्छन्, एलर्जी डर्माटाइटिस (Allergic Dermatitis) भएमा लक्षण छालामा र श्वास नलीमा (Bronchus) मा भएमा दमको लक्षण देखिन्छन् । जहाँ जस्तो लक्षण देखिन्छन् ,उपचार सोही अनुरूप गर्नुपर्छ ।
प्रश्न ६: ५-६वर्ष उमेर पुग्दा बच्चाहरू यी लक्षणबाट मुक्त हुन्छन्, के साँच्चिकै हो त ?
यो सत्य हो कि धेरै बालबालिकाहरूले ५-६ वर्ष उमेर पुगेपछि आंशिक वा पूर्ण रूपमा दमको लक्षणबाट मुक्ति पाउँछन् । तर कुन बच्चाहरूले आंशिक वा पूर्ण मुक्ति पाउँछन् र कुन बच्चाहरूमा लक्षण झनै समस्याग्रस्त हुन्छन् भन्ने पूर्वानुमान गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यस्ता बच्चाहरूलाई सही समयमा सही उपचार विधि (Inhaler) अपनाउनु जरुरी छ । यसले भविष्यमा हुनसक्ने दमको जटिलताबाट बच्चालाई जोगाउन सकिन्छ । साथै दमलाई नियन्त्रणमा राखी सामान्य जीवनयापन र शारीरिक विकास हुन दिन सकिन्छ ।
प्रश्न ७: के दम पूर्ण रूपमा निको हुन्छ ?
केही रोगहरूलाई पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिँदैन तर नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । जस्तै ब्लड प्रेसर, सुगर आदि । त्यस्तै दम पनि डाक्टरको सल्लाह र आवश्यकता अनुसार नियमित र सही उपचार विधि (Inhaler) प्रयोगले पूर्ण नियन्त्रणमा राखी जीवन पूर्ण क्षमताका साथ बाँच्न सकिन्छ ।
डेभिड बेकहम (David Beckham) प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी, सौरभ गांगुली (Saurav Ganguly) प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान, जेसिका अल्बा (Jessica Alba) प्रसिद्ध अभिनेत्री, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachhan) प्रसिद्ध बलिउड अभिनेता लगायत थुप्रै प्रसिद्ध व्यक्तिहरू आफ्नो दम नियन्त्रणमा राख्न सफल भई जीवनमा धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् भने तपाईको बच्चाले पनि पछि आफ्नो क्षमता अनुरूप सफलता पाउन सक्ने छ ।
प्रश्न ८: इन्हेलर (Inhaler) कि चक्की वा झोल नै राम्रो ?
इन्हेलर (Inhaler) बाट औषधि लिँदा सिधै श्वास नलीमा पुग्ने हुनाले त्यसको असर पनि छिटो हुन्छ। साथै औषधिको मात्रा (Dose) एकदमै कम हुने हुनाले अवाञ्छित असर पनि एकदम कम हुन्छन् । यो उपचार विधि संसार भरीका विशेषज्ञ डाक्टरहरूले सिफारिस गरिएको विधि हो । यदि तपाईको बच्चालाई दम छ तर तपाई इन्हेलर (Inhaler) प्रयोग गरिरहनु भएको छैन भने, यो ठुलो भुल हो ।
प्रश्न ९: इन्हेलर (Inhaler) धेरै कडा औषधि हो,ठुलो मान्छेलाई मात्र दिने होइन र ?
यो भ्रम हो कि इन्हेलर (Inhaler) धेरै कडा औषधि हो। वास्तवमा इन्हेलर (Inhaler) चक्की वा झोल औषधिको तुलनामा कम मात्रा (Dose) हुने हुनाले झनै सुरक्षित छन्। आवश्यकता अनुसार ठुला मान्छे, साना बच्चा सबैले उपयोग गर्न सक्छन् ।
प्रश्न १०: एक पटक इन्हेलर (Inhaler) सुरु गरेपछि बानी पर्छ ?
सबैभन्दा पहिले हामीले “आवश्यकता” र “बानी” बिचको फरक बुझ्नु पर्छ। यदि मेरो आँखा कमजोर छन् भने चस्मा लगाउनु मेरो आवश्यकता हो बानी होइन । त्यस्तै दम भएका बच्चाको लागी इन्हेलर (Inhaler) आवश्यक हुन् ।
प्रश्न ११: दमको उपचारमा अन्य उपचार विधि राम्रो छ ?
इन्हेलर (Inhaler) विधि विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त दमको उत्कृष्ट उपचार विधि हो । यसको सिफारिस गरिनु अघि धेरै अध्ययन र रिसर्च गरिएको छ । अन्य उपचार विधिको बारेमा त्यो भन्न सकिँदैन ।
प्रश्न १२: घरमै बाफ लगाउने मेसिन (Nebulizer) छ। त्यही प्रयोग गर्दा हुँदैन ?
अध्ययनले इन्हेलर (Inhaler) बढी प्रभावकारी र सुरक्षित देखिएको छ । त्यसैले बाफ लगाउने मेसिन (Nebulizer) दैनिक औषधी प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन ।
एलर्जी दम बच्चा रुघाखोकी
बाल दम तथा एलर्जी रोग विशेषज्ञ